Iyo nyowani vhezheni yeLinux Kubva kuKutanga 8.3 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Pakupedzisira september 2 iyo nyowani vhezheni yeLinux kubva kuScratch yakaburitswa kana zviri nani kuzivikanwa seLFS. Iyi vhezheni vhezheni 8.3 inounza mitsva nyowani yezvinhu zvehurongwa.
Linux Kubva Kumusoro (LFS) chirongwa chinopa matanho anodiwa kuti ugadzire yako yakasarudzika Linux system.
Izvo ndezve avo vasingade kungo tsamira pane zviripo zvekuparadzirwa kweLinux, senge Debian naRehat.
Avo vanoda kunyatsoongorora mashandiro anoita Linux sisitimu uye vanoda kuiisa vega neyakajairika tsika, vanogona kushandisa iyi posvo seyakakosha nzira yekufamba nenzira yese.
Nguva izvi zvinoda ruzivo rwakanaka rwekutanga nezveGNU / Linux, bhuku racho rinonyatsotsanangura danho rega rega rekuvaka iyo sisitimu kuti riitwe nevanhu vazhinji sezvinobvira.
Este inovakwa kunyanya mumatanho maviri.
Kutanga, kumisikidzwa kwecheni yekuvaka cheni (inonziwo tambo yechishandiso) iyo inobvumidza kuve yakazvimiririra kubva kune Yekugamuchira system uye nekuvimbisa yakagadzikana kuvaka, zvisinei neyakagadzwa inomiririra yekugovera.
Ipapo kuvakwa kwekupedzisira bhuti system.
Chikonzero chakakosha kwazvo che kuvapo kweLFS ndeyekudzidzisa vanhu mashandiro eLinux system mukati.
Kuvaka LFS system inodzidzisa zvese zvinoita kuti Linux ishande, mashandiro anoita zvinhu pamwe uye anoenderana. Uye zvakanyanya kukosha, maitiro ekuzvigadzirisa kune ako kuravira uye zvaunoda.
Semhedzisiro, LFS ibhuku rinopa nhanho-nhanho mirayiridzo yekuti ungavaka sei yakakosha Linux system kubva pakutanga.
Iyo BLFS inowedzera iyo LFS bhuku kupa zvimwe zvidzidzo pakunyora X Window System, mamaneja ewindo uye nharaunda dze desktop, pamwe neakawanda anozivikanwa desktop uye server mapakeji uye kwavo kutsamira, zvichibvumira mushandisi kugadzirisa akasiyana Linux masisitimu.
1 Nezve iyo nyowani Linux Kubva kuKutanga 8.3 kuburitswa
2 Dhawunirodha Linux Kubva kuKutanga 8.3
Nezve iyo nyowani Linux Kubva kuKutanga 8.3 kuburitswa
Bruce Dubbs akazivisa vhezheni itsva yeLinux Kubva kuKutanga pamwe neLFS vhezheni 8.3 (systemd), BLFS vhezheni 8.3 uye BLFS vhezheni 8.3 (systemd).
Iyi vhezheni ichi chiitiko chikuru cheLFS uye BLFS. Mirayiridzo yekuvaka iyo Linux system pachayo zvakavakirwa pane kernel 4.18.5.
Uyewo, Glibc yakagadziridzwa kuita vhezheni 2.28 uye iyo GCC compiler muunganidzwa kusvika 8.2. PaInit masisitimu iwe une sarudzo yeSystemd 2.39 kana Sysvinit 2.90. Iyo webhusaiti yeiyo nyowani vhezheni yeLinux kubva kuScratch inonyora zvimwe zvakagadziridzwa zvinhu.
NeLFS, vashandisi vanovaka yakasarudzika Linux system nhanho nhanho nekunyora zvimwe zvikamu kubva kunobva kodhi.
Iyo Beyond Linux Kubva Scratch kudhindwa kwebasa inouya nemazana akakurisa mapakeji mukuwedzera kune izvo zvatovemo mukati meLinux Kubva kuScratch zvinyorwa.
Neiyi nzira, ivo havangosvika chete pakuziva akakosha emaraibhurari, asi vanogona kubva vawedzera iyo yekutanga system nematafura avo kana maseva.
Kune vanofarira Linux vashandisi, Linux kubva kuKutsva iri pamusoro pese mukana wakanaka wekuziva yako yekushandisa system kubva pakutanga. Linux haina kuunza maLinux mafaera neScratch, mushandisi anotofanira kurodha pasi uye kuumbiridza.
Iyi vhezheni ine ingangoita mazana manomwe anovandudza kubva pane yapfuura vhezheni, Kuwedzera akawanda mameseji uye fomati shanduko.
Iyi kuburitswa kutsva kunowanikwa kune wese munhu anoda kuiverenga uye zvakare kurodha pawebhusaiti yemusiki.
Linux Kubva kuScratch pkglist inowanikwa ipapo pamwe neiyo nyowani 8.3 vhezheni iyo inowanikwa mune akasiyana mafomati pamwe neSystemd, Beyond Linux Kubva Scratch pamwe neayo pkglist futi.
Dhawunirodha Linux Kubva kuKutanga 8.3
Kana iwe uchida kutora iyi nyowani vhezheni yeLinux Kubva kuKutanga, ingo enda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti uko kwaunogona kurodha pasi iyo HTML kana PDF vhezheni yesununguro iyi nyowani.
Saizvozvowo Unogona kushandisa zvinotevera zvinongedzo kuti uwane Linux Kubva Kukanda 8.3.
BLFS 3 (HTML)
BLFS 3-systemd (HTML)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo itsva vhezheni yeLinux Kubva kuKutanga 8.3 yave kuwanikwa
Mhoroi, iwe unoziva here izvo zvinodiwa zvehardware zvaunoda kuti uzviedze?
Inogona kuyedzwa muVirtualbox?
Mhoro Mariano. Iri rinongova "bhuku" iro rinokutungamira pamaitiro ekuvaka yako kugovera kubva kuKernel nerubatsiro rwezvishandiso zvakasiyana.
Pane izvo zvinodiwa hapana zvakadaro sekunge iwe unogona kuvhura iyo PDF kana mafaera eHTML pakombuta yako kana nhare mbozha.
Nyora iyo nyowani vhezheni yeLibreOffice 6.1.1 nekuvandudza nyowani